Maraykanka oo xadidaya duqeymaha diyaaradaha Drone ee Caalamka | Jowhar somali news leader
Home NEWS Maraykanka oo xadidaya duqeymaha diyaaradaha Drone ee Caalamka
Maraykanka oo xadidaya duqeymaha diyaaradaha Drone ee Caalamka
Maraykanka ayaa si ku meel gaar ah “u xadiday” duqeymaha diyaaradihiisa uusan duuliyaha saarnayn ee Drones-ka ay ka fuliyaan dalalka ka baxsan Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, sida uu qoray wargeyska Washington Post.
Ujeedada go’aankaas ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay dib u eegis lagu sameeyo madax bannaanida la siiyay militariga iyo sirdoonka Maraykanka ee ku hawlan la dagaallanka argagixisada.
Washington ayaa 20-kii sano ee la soo dhaafay, duqeymaha drones-ka u adeegsaneysay bartilmaameedsiga mintidiinta Islaamka, gaar ahaan Al-Qaacida iyo Daacish.
Sida uu sheegay wargeyska, xayiraadda cusub ee uu soo rogay maamulka Biden ayaa ka dhigan in saraakiisha Maraykanka ay oggolaansho ka helaan Aqalka Cad ka hor inta aanay dilin ama qaban dadka ay beegsanayaan.
Maamulkii Trump ayaa saraakiisha militeriga iyo kuwa CIA-da u oggolaa in oggolaanshaha noocaas ah ay ka qaataan safiirka Maraykanka u fadhiya dalka hawlgalka laga fulinayo.
Afhayeen u hadashay Golaha Ammaanka Qaran ee Maraykanka, Emily Horne, ayaa sheegtay in u jeedada lagu xadiday duqeymaha Drones-ka ay tahay in Madaxweyne Biden uu si dhaw ula socdo hawlgalladaas, sida uu sheegay wargeyska.
Siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa dhaliilay go’aanka Biden, iyagoo ku tilmaamay mid “fursad siinaya cadowgeena.”
Xildhibaannada kala ah Mike D. Rogers iyo Michael McCaul ayaa ku tilmaamay go’aanka mid khatar ku ah Maraykanka, sida uu qoray wargeyska Washington Post.
“Inta ay saraakiisheenu sugayaan oggolaansho ay ka helaan Washington, waxaa baxsan kara argagixisada, kuwaas oo ka dibna soo weerarri kara Maraykanka iyo xulafadiisa.”
Maamulkii Trump ayaa in ka badan 160 duqeyn ka fuliyay dalalka Soomaaliya iyo Yemen, sida lagu sheegay wargeyska Long War Journal.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabay inuu wax ka beddelo qaar ka mid a siyaasadihii ugu waaweynaa Donald Trump, saacado ka dib markii la dhaariyay.
Intii uusan xilka ka degin, Trump ayaa amray in ciidamada Maraykanka laga saaro Soomaaliya, taas oo walaac badan ku dhalisay madaxda Federaalka.
Previous articleThe diplomatic uprising against Myanmar’s junta deepens in the midst of a brutal attack
Next articleAfyare Cabdi Cilmi oo loo magaacabay Agaasimaha hay’adda HERITAGE